Angidinganga isiNgisi ukuqokwa kuma-BET - Babes Wodumo | News24
Johannebsurg - IGqom Queen, uBongekile "Babes Wodumo" Simelane, ithi ayidinganga isiNgisi esiphezulu ukuze iqokwe kuma-BET Awards kodwa ukuqokwa kwayo kumayelana nomculo wayo "onswempu".
Lesi sihlabanu somculo esiqokelwe iBest International Act sitshele iTshisaLIVE ukuthi siyafa yinjabulo ngokuqokwa kwaso kuma-BET ngoba kuveze ukuthi ukungasikhulumi kahle isiNgisi akuhlangene nokukhipha umculo omnandi.
"Ngicabanga ukuthi ukuqokwa kwami kuveze ukuthi ukukhuluma kwami isiZulu akuzange kungivalele iminyango kodwa kunalokho kungivulele yonke iminyango. Angidinganga ukukhuluma isiNgisi ukuze abama-BET bangazi."
OLUNYE UDABA:Kusolwa ithimba ngokonela uBabes Wodumo izinto
UBabes uthe angase anandise kwezinye izindawo zakhona le eMelika waqhuba ngokuthi akumkhathazi ukuthi izihlwele zangale zizomuzwa noma cha ngoba umculo wakhe uzozithokozisa.
"Umculo nomdanso wami uhlale ushiya abantu bejabulile, ngakho-ke ngizokwenza ezibukwayo. Ngaphezu kwalokho ngiyaziqhenya ngokuba yintombi yomZulu futhi lokho angeke kushintshe. Ngibheke nje manje, mhlawumbe ngingase ngizithole ngiphole noRick Ross nje," kusho uBabes.
UBabes usedlule ebunzimeni obuningi "ehlukunyezwa" ngokukhetha ukukhuluma isiZulu nokungakwazi ukushibilika olimini lwesiNgisi.